အစိတ်အပိုင်းများထုတ်ခြင်းစက်စင်တာ V စီးရီးစက်ရုံ - China အပိုင်းစက်စက်ကိရိယာစင်တာ V စီးရီးထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
500kg Max Load Vertical CNC စက်၊ နှာခေါင်းဗိုင်းလိပ်တံ CNC စက်စင်တာ
အမည်: ဒေါင်လိုက် CNC စက် V85 X Axis ခရီးသွားခြင်း - ၈၀၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀mm Z ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: BT40 နှာခေါင်းဗိုင်းလိပ်တံဗား: ၇.၅kw အရွယ်အစား - ၂၄၅၀ * ၂၁၁၀ * ၂၆၅၀ မီလီမီတာအမြင့်တင် - ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်အများဆုံး ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ဒေါင်လိုက်စီဒီစီစက်။ Centre V85 BT40 နှာခေါင်းဗိုင်းလိမ်းတံကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ V85 သည်မြင့်မားသောဒေါင်လိုက်စက်ပြုလုပ်သူနှင့် ၀ င်ရိုး ၃ လုံးရိုးရိုးဖြောင့်စက်လမ်းညွှန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ 2. V85 သည်ပါးလွှာသောဗိုင်းလိပ်တံဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
မြင့်မားသောတိကျသောဒေါင်လိုက် CNC စက်၊ 10000 ဗိုင်းလိပ်တံလည်ပတ်မြန်နှုန်း
အမည်: V106 ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာဇယားအရွယ်အစား - ၁၃၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ၁၀၀၀ * ၆၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးနှင့် ၁၇၀-၇၇၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT40-150 T-Slot: 5-18-100 Spindle မော်တာ: 11kw Rapid Feed: ၄၈/၄၈/၄၀ M / min ၄ ၀ င်ရိုးသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စျေးပေါသောစီအင်စီစက်စက်ပရိုဂရမ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - Model V106 ဇယားအရွယ်အစား ၁၃၀၀ * ၆၀၀ X / Y / Z ခရီးစဉ် ၁၀၀၀ * ၆၀၀ * ၆၀၀ ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်အကြားအကွာအဝေး စားပွဲတင် 170-770mm T က slot က (NO ။ size.pitch) 5-18 * 100 ဗိုင်းလိပ်တံလည်ပတ် ...
800mm X Axis Travel CNC မှိုစက် 3616 Ball Vrew V85 3800 Kilograms
နာမည်: Vertical CNC Machine V85 ဇယား: 900 * 450mm X Axis ခရီးသွားခြင်း - 800 * 500 * 500mm Spindle နှင့် Table အကြားအကွာအဝေး: 170-670mm Spindle Taper: BT40-140 T-Slot: 3-18-1303Axis Guide Way: 35 Ball ball Screw အရွယ်အစား: 3616 3616 Ball Screw V85 ဒေါင်လိုက် CNC စက် V85 800mm X axis Travel BT40 ဗိုင်းလိပ်တံကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: ၁။ V85 သည်အမြန်နှုန်း ၄၈ မီတာ / မိနစ်လျှင်မြန်သောအစာ၊ ၁၅ မီတာ / မိနစ်ဖြတ်သောအစာအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ 2. V85 သည်မြင့်မားသော ineritia ကိုခံနိုင်သည့်ကြီးမားသော span structure ကိုအသုံးပြုသည်။
Tools များ 24 ATC ဖြင့် 600 * 400 * 420mm BT40 7.5kilowatt CNC မှိုစက်
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်ဝိုင်းစင်တာဇယားအရွယ်အစား - ၇၀၀ * ၄၂၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ခရီးသည် - ၆၀၀ * ၄၀၀ * ၄၂၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးနှင့်ဗိုင်းကြား - ၁၇၀-၅၉၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT40-120 T-Slot: 3-18-125 ATC အမျိုးအစား : 24 Tool Arm Type Tool မဂ္ဂဇင်းလျှောက်လွှာ။ အစိတ်အပိုင်းများ BT40 7.5KW ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရားစက်ကိရိယာ ၂၄ ခုပါ ၀ င်သောကုန်ပစ္စည်းများ။ ATC ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ - ၁။ X, Y, Z ကိုထိန်းချုပ်သည့်သြဒိနိတ်၊ ဗိုင်းလိပ်တံ servo မော်တာ၊ မဂ္ဂဇင်း။ 24 tools များ၏စွမ်းရည်။ ၂ ။
15 M / Min Cutting Feed V54 Cnc ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲစင်တာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်ဝိုင်းစင်တာ V54 X ဝင်ရိုးတန်း - ၅၅၀ မီလီမီတာ Y ဝင်ရိုးတန်း - ၄၀၀mm မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၄၅၀ မီလီမီတာလျင်မြန်စွာအစာ: ၄၈ M / min ဖြတ်တောက်သောအစာ: ၁၅ M / min Tool Change Time: 2.5 Seconds လျှောက်ထားခြင်း: သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ V54 CNC Controller System Machining Center ၄၈ မီတာ / မိနစ်ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ခြင်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ ပုဆိန် ၃ ခုသည်ဘောလုံးလမ်းညွှန်နည်းလမ်းသို့မဟုတ်ကြိတ်စက် linear နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်းမြန်နှုန်း ၄၈ မီတာ / မိနစ်။ စက်၏အခြေခံအကျဆုံး span တည်ဆောက်ပုံ ၂ ။